The David: sary sokitra mahavariana indrindra amin'ny tantaran'ny zavakanto | Famoronana an-tserasera
«100902.Crucero.IMG_1813» avy amin'i Ricardo SB dia nahazo alalana tamin'ny CC BY-NC-SA 2.0
Nandritra ny tantaran'ny zavakanto dia nisy mpanao sary sokitra tsara izay nanao majika tamin'ny tanany. Fametrahana sarivongana, hyper-realistika, mifandraika amin'ny tantara lehibe na angano noho ny fiantraikany.
Ao amin'ity lahatsoratra ity andao jerena ny fahalianana momba an'i David an'i Michelangelo, mitondra antsika amin'ny fotoana namoronana azy. Andao handeha hiverina ara-potoana!
David's Michelangelo angamba no sary sokitra malaza indrindra amin'ny tantaran'ny zavakanto. Ity sary sokitra voasokitra tamin'ny marbra ity, 5,17 metatra ny haavony ary 5572 kilao ny lanjany, Io dia nataon'i Miguel Ángel Buonarroti teo anelanelan'ny 1501 sy 1504. Ny sarivongana dia notendren'ny Opera del Duomo avy amin'ny Katedraly Santa Maria del Fiore, Florence. ny Opera del Duomo niandraikitra ny fitehirizana sy ny fikojakojana ireo toerana masina. Ary koa amin'ny biraon'ny mpiasa ao amin'ny Katedraly Florence sy ny guild an'ny mpivarotra volon'ondry. Ireo vondrona ireo Tian'izy ireo ny hanangana sary sokitra lehibe miisa roa ambin'ny folo amin'ny tarehin-tsoratra masina ho an'i Santa María del Fiore. Ny David no fahatelo tamin'ny sary sokitra.
Maneho ny fandresen'ny Baiboly an'i David tamin'ny fiatrehany an'i Goliath. Fa maninona no novokarina manokana io komisiona io? Amin'ny maha tandindon'ny Repoblikan'i Florence, ny faharesen'ny Girolamo Savonarola ara-pivavahana talohan'ny naha-ambony ny Medici sy ny fandrahonana avy amin'ny fanjakana papaly. Amin'ity tranga ity dia nihinana ilay trondro kely ny lehibe.
Ary avy taiza ny vato marmora toy izany? Eny, avy amin'ny kariera Fantiscritti, any Carrara, izay entina an-dranomasina mankany Florence amin'ny ony Arno.
Ahoana no niatrehan'i Miguel Ángel asa toy izany? Eny, mifototra amin'ny sketsa sy maodely kely vita amin'ny savoka na terracotta. Mifanohitra amin'izay andrasana, Michelangelo dia tsy nanao maodely vita amin'ny plaster amin'ny habeny, toy ny fanaony tamin'ny fotoan'androny, fa tamin'ny marbra no nanaovana azy io, tamin'ny fampiasana ny chisel.
Ny iray amin'ireo mampiavaka azy manokana dia ny fahitana azy amin'ny fomba fijery rehetra, fa tsy avy eo aloha fotsiny, toy ny tamin'ny sary sokitra tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Ny David dia azo deraina amin'ny mombamomba azy rehetra, zavatra izay nianaran'i Michelangelo tamin'ny antsipiriany rehefa nandoko azy.
«David de Miguel Angel, Galleria dell'Accaedemia» avy amin'i gemma.grau dia nahazo alalana tamin'ny CC BY-NC-SA 2.0
Inoana fa, tamin'ity solontenan'i David ity, mbola tsy resy i Goliath, satria, tamin'ny toerany, toa vonona hiady, mihenjana, miaraka amin'ny vatana somary nivadika (fihetsika malaza tamin'izany fotoana izany, nantsoina contrapposto. Amin'ity tranga ity dia inoana fa noho ny lavaka ao anaty lasitra tany am-boalohany, izay tsy maintsy namboarin'i Michelangelo), ny volomaso sy ny vavorona somary mivelatra, ao anaty fanjakana tezitra, saika hanafika. Ny fanadihadiana hafa dia mino fa ny sarivongana dia maneho ny fotoana marina namonoan'i David an'i Goliath ary nibanjina azy tamim-pahatezerana nefa nilamina.
Ny fahalianana iray hafa miavaka dia ny David tsy mifanaraka amin'ny fizarana mahazatra nihaona tamin'ny sary sokitra tamin'izany fotoana izany. Inoana fa noho ny toerana hipetrahan'ny sarivongana io, ao amin'ny iray amin'ireo fitoeran'ny Santa María del Fiore, amin'ny fomba iray izay nahatanterahana lavitra ireo refy ireo.
Manasongadina izany ihany koa tokony hoforanaSatria i Jody dia Jiosy, ka tsy izany no atao amin'ny sary sokitra. Fanazavana isan-karazany no nomena momba an'io zava-misy io, nefa tsy misy farany.
Farany, ity asa kanto kanto ity Napetraka tao amin'ny Plaza de la Signoria io, izay misy kopia 3 metatra ny haavony ankehitriny, rehefa nosoloina tamin'ny 1873. Ny fiovana dia nitranga noho ny fanafihana tsy tapaka nataon'ny mpiaro ny Medici (notoraham-bato izy, notapahina ny sandry, sns). Voaro izy io ao amin'ny Gallery of the Academy avy any Florence, izay misy filaharana lava miaraka amin'ireo mpizahatany maniry hahita ity asa kanto kanto ity.
Ary ianao, inona no andrasanao hahitanao bebe kokoa momba ny fiainana mahavariana an'ny mpanao sary sokitra Renaissance?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » The David, iray amin'ireo sary sokitra mahavariana indrindra amin'ny tantaran'ny zavakanto